December 2017 - Myanmar News Plus
၃ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ် လေးကို နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ပြီး အိပ်ယာခင်း နဲ့ထုပ်၊ ကွန်ကရစ်ပြားနဲ့ဖုံးထားအုပ် ခဲ့သည့် စုံတွဲ
အသက် ၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ဝိချိတ မှ ကောင်လေး ရဲ့ ဗီဒီယို ပုံရိပ်တွေကတစ်ဆင့် လပေါင်းများစွာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီး သူရဲ့မိခင် ဖြစ်သူနဲ့ မိခင် ဖြစ်သူရဲ့ ချစ်သူ တို့နဲ့ အတူနေထိုင်ရာ အိမ်ထဲက ကွန်ကရစ်ထဲမှာ ၎င်း ကောင်လေး ရဲ့ အလောင်း ကို တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကုို သစ်ကုိုင်းခြောက် ဖြင့် အဓမ္မပြုကျင့်သူ နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရ။
အသက်(၂၃)နှစ်အရွယ် ရုရှားနုိုင်ငံသား ဂီဇာ ဇီရရန်ဂါဗွီးဆုိုသူဟာ အမျိုးသမီး များကုို အဓမ္မပြုကျင့် မှု ပေါင်းများစွာကျူးလွန်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယခုအန်နာ့အပေါ်ကျူးလွန်မှုဟာ လေးယောက်မြောက် ဖြစ်တယ်လုို့လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ က ပြောကြားပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်း များရှိ အလုပ်သမား များအတွက် အခြေံခံ အခကြေးငွေအဖြစ် တစ်ရက် (အလုပ်ချိန် ရှစ်နာရီ)လျှင် ကျပ် ၄၈၀၀ သတ်မှတ်ရန် နေပြည်တော် အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနတွင် ယနေ့ နံနက် ပြုလုပ်သော “အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ သတ်မှတ်နိုင်ရေး ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ၏ စတုတ္ထအကြိမ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး” တွင်ယနေ့ညနေပိုင်းကသဘောတူခဲ့ကြသည်။
ကျောက်ဆည် က ထူးဆန်း တဲ့ အနုကြမ်းစီးမှု ကျုးလွန်သူမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေ
30-12-2017 မနက်စောစော ကျောက်ဆည်မြို့ မင်းရပ်(ဆင်နှစ်ကောင်ဝင်း)အတွင်းရှိ အမျိူးသမီးများသာနေထိုင်သောနေအိမ်အတွင်း ဓားကိုင်အနုကြမ်းစီးသူအား အနီးပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူမှဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့၍ နယ်ထိမ်းအဖွဲ့မှ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး။ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသူနယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး အမျိုးသမီး တစ်ဦးမှာ လည်ပင်းပြတ်ရှ ဒဏ်ရာပြင်းထန်။
အချိုမှုန့် ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာနဲ့ လုပ်ထားတာလဲ? ဘယ်လောက်များ အန္တရာယ် ပေးနိုင်လဲ
သင့်အိမ်ထဲမှာ သင်နှင့်အတူ သင့် မိသားစု ကိုပါ အသံတိတ် သတ်ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့ လူသတ်သမား ကို သင်ကိုယ်တိုင် အိမ်ထဲသို့ဖိတ်ခေါ်ထားမိသလားဆိုတာ မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် စီစစ်သင့်ပါပြီ။ရေရှည် မှန်မှန် စားသွားရင် ဒီလောက် အန္တရာယ် များပါတယ်ဆိုတဲ့ အချိုမှုန့် ဆိုတာ Monosodium glutamate(MSG) လို့ခေါ်တဲ့ ဒြပ်ပေါ င်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Glutamic Acid လို့ခေါ်တဲ့ Amino Acid တစ်မျိုး ပါဝင်ပြီး စားစရာထဲထည့်လိုက်ရင် Free Glumate တွေ အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲသွားကာ အစားအသောက် တွေရဲ့ အရသာကို ဓာတုနည်းနဲ့ လျှာပေါ်မှာ ဆပွား တိုးပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သမီး ရည်းစား အတူနေပြီး လက်မထပ်သည့် အမျိုးသား များ အတွက် ဥပဒေ တဲ့နော်
သမီး ရည်းစား ဘဝ တွင် အတူနေထိုင်ပြီး လက်မထပ်သည့် အမျိုးသား များ ကို ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်နှင့် အထက် အရေးယူနိုင်သည့် ဥပဒေ ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်း သွားမည်
ဖင်မယား နဲ့နော် သတ္တိ ရှိရင် တစ်ယောက်ချင်းထိုးမယ်။
မင်း ဘာစကားပြောလိုက်တာလဲ ညီလေးအေးးမင်းစကားတွေအတွက် မင်းပြန်ပေးဆပ်ရမယ်ဖင်မယားနဲ့နော် သတ္တိရှိရင် တစ်ယောက်ချင်းထိုးမယ်။
ငါနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး အောင်လအောင်ဆန်းနဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုလည်းရတယ် ကင်မရာယူခဲ့မယ်။
နင့်ဘာသာ သဝန်တို နေတာသူ သဝန်တို နေတယ်ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ အဲ့လိုသွားပြောတော့ ဟိုက စိတ်ဆိုးတာပေါ့။ ချစ်သူ တစ်ဦးအနေနဲ့ သဝန်တို ခွင့် သူ့မှာရှိတယ်လေ။ ဒါကို သွားပြောလိုက်ရင် သူ့ကို မချစ်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် အရေးမပါဘူးလို့ ပြောလိုက်သလိုပဲ။
လျှာအောက် မှာ သကြား နဲ့ ဆား ကိုငုံပြီး အိပ်ရင် ဘာဖြစ်သလဲ
မင်္ဂလာပါနော်။ အခုသလော ညည အိပ်မပျော်ဘူးဖြစ်နေလားရှင့်။အိပ်မပျော်လို့ မနက်စောစောမထနိုင် လုပ်စရာရှိလို့ အတင်း ကုန်းရုန်းထရပေမဲ့ တစ်နေကုန်ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဖြစ်နေလား။ အိပ်မပျော်ပါဘူးဆို Facebook ကြည့်လိုက် ဂိမ်းဆော့ လိုက်နဲ့မို့ ပိုပြီး အိပ်မပျော်ဖြစ်နေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုပါပြီ။